Alao sary an-tsaina ny sweatshirts amin'ny endriny tsara indrindra sy hampiroborobo ny asanao | Famoronana an-tserasera
Pablo Gondar | | Graphic Design, Photoshop, dia midika hoe
Alao sary an-tsaina ny sweatshirts amin'ny endriny tsara indrindra ary mahavita misambotra ny sary an-tsary rehetra ao a fanohanana lamba hanampy anao izany alao sary an-tsaina amin'ny fomba hafa ny volanao. Ny sary an-taratasy dia tsy mitovy amin'ny sary amin'ny fanohanana lamba, ka izany no antony tsara indrindra hahitantsika ny asantsika amin'ny akanjo.
Ny fanoharana amin'ny fitafiantsika manokana dia zavatra tena manintona isaky ny mpanakanto satria mahazo hampiroborobo ny kantontsika amin'ny fomba manokana kokoa, afaka manandrana koa isika amidio ny lambanay manokana naseho tamin'ny fampiasana an'ity karazana fanesoana ahafahantsika manampy haingana ny volavolanay amin'ity fanohanana ity.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia misintona ny makety de Internet. Ny zavatra tsara momba ny tamba-jotra dia ny fananantsika vavahady tsy misy farany ahafahantsika misintona an'ity karazana fitaovana ity, amin'ity tranga ity dia ampidinintsika amin'ity ity rohy.
Vantany vao nosokafanay ny makety sweatshirt no zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny mijery ny faritra sosona Photoshop. Amin'ity faritra ity dia afaka mahita ny misy loko ho an'ny sweatshirt misy antsika, miaraka amina tsotra Click vitantsika ny nanova ny lokon'ny lamba tamin'ny fomba tena izy.
Para ampiharo ny volavolainay mila manome roa heny fotsiny isika Click ao amin'ny sosona voalohany (Ny volanao eto) rehefa manao indroa Click Hisokatra varavarankely vaovao.
Ny zavatra manaraka tokony hataontsika hahitantsika ny antsika endrika apetraka amin'ity akanjo ba ity dia ny mampita ny volavolantsika amin'ity varavarankely vaovao ity. Tokony ho fantatsika fa izany makety mamela antsika hanao fanovana isan-karazany amin'ity sosona ity, raha irinay afaka manampy fonosana, sosona fanitsiana sns. Ny filamatra dia ny manamboatra ny endrika mety indrindra mba hitovy amin'ny tadiavintsika.
Rehefa manana ny endriny vonona isika dia tokony hanome azy tehirizina haseho ny fiovana eo amin'ny sosona voalohany an'ny makety.
Este makety azontsika atao ny mampiasa azy ho toy ny kisarisary satria rehefa mandeha manao pirinty ny fitafiantsika isika dia azontsika atao ny mampiseho an'io sary an-tsary nomerika io amin'ny magazay fanontana ary manome azy ireo hevitra momba izay tadiavintsika. Raha mpanakanto maniry fatratra sary ianao dia tsy azonao hadinoina ireo fahafaha-manaon'ity tontolo lamba ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Alao sary an-tsaina ny sweatshirts amin'ny endriny tsara indrindra